Ny moraingy na morengy dia karazana haiady nentim-paharazana malagasy ampiasana ny hondry sy ny tongotra, tsy ampiasana fitaovam-piadiana hafa. Tamin ny nanjakan ny taranaka maroseragna tao amin ny Sakalava any amin ny morontsiraka andrefan i Mad ...
Ny kolontsaina malagasy dia kolontsainny vahoaka malagasy izay isan-karazany sady ahitana taratra ny andiam-pifindrà-monina nifanesy avy any ivelany nankaty Madagasikara, indrindra ny avy any Azia Atsimo-Atsinanana sy Afrika Atsinanana. Izany kol ...
Ramahavalisoa José Helihanta fantatra aminny solonanarana hoe Poopy dia Mpanakanto Malagasy. Nianatra teny aminny Lycée Andohalo Izy ary ny anarana hoe Poopy dia solonanarani Giana, izay zanaky ny nenintoany, ka rehefa mitaiza ani Giana izy dia i ...
D. B. Cooper dia ny haino aman-jery epithet malaza ampiasaina mba hilazana ny tsy fantatra lehilahy keriny ny Boeing 727 fiaramanidina ao aminny airspace eo Portland, Oregon, sy Seattle, Washington, taminny Novambra 24, 1971, extorted $ 200.000 a ...
Ny Fianakaviana aminny fomba malagasy dia ny fitambaranny ray sy ny reny ary ny zanaka. Ny anambadian-kiterahana, hoy ny Ntaolo, ka ny zanaka no mamy indrindra aminny Malagasy ary antsoina hoe "sombinny aina". Ny zokiny indrindra aminny zanaka di ...
Ny fiteny malagasy dia tenim-pirenen ny Repoblikan i Madagasikara. Ny fiteny malagasy dia ao amin ny vondrom-piteny baritô. Any Banjarmasin, nosin i Kalimantan no foibenny fiteny baritô. Ny fiteny akaikikaikinny fiteny malagasy ankehitriny dia ny ...
Ny Taom-baovao malagasy dia ny fiandohan ny taona malagasy sy ny fankalazana izany izay mitranga eto Madagasikara sy any ivelany koa amin ny andro voalohan ny taona voafaritra araka ny tetiandro malagasy na amin ny fomba hafa. Aminizao taonjato f ...
Ny Televiziona Malagasy dia ny mpandefa ny haino aman-jery aminny fahitalavitra ary ny firenena sy ny fanjakana malagasy no tompony. Naorina taminny taona 1965 ilay izy taminny vanim-potoana nitondraniPhilibert Tsiranana. Mba hahafahanilay televi ...
Ny Malagasy, aminny ankapobeny, dia ireo olona rehetra miaina ao Madagasikara. Ny olona tety ivelany no nanome io anarana hoe Malagasy io sy Madagasikara koa ho anny vahoaka malagasy sy i Madagasikara, firenena onenanny Malagasy. Ny teny hoe Mada ...
Ny Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy dia dikan-tenin ny Baiboly amin ny teny malagasy ampiasain ny fiangonana prôtestanta miteny malagasy amin ny fotoam-pivavahana. Ny edisiona tamin ny taona 1909 izay nasiam-panitsiana madinika tamin ny ...
Ny fivavahan-drazana malagasy na ny finoan-drazana malagasy dia ny fivavahana sy ny finoana narahin ny Ntaolo malagasy, izay mifototra indrindra amin ny fivavahana amin ny Zanahary sy ny fanahin ireo razana efa maty. Miovaova isam-paritra ny endr ...
Ny tetiandro malagasy dia tetiandro nampiasainny Malagasy talohanny nampiasany ny tetiandro gregoriana nentinireo vazaha sady mbola ampiasaina aminny sehatry ny fanandroana. Araka ny hevitry ny maro dia tetiandro manara-bolana ny tetiandro malaga ...
Ny Baiboly amin ny teny malagasy dia dikan-tenin ny Baiboly amin ny teny malagasy ampiasain ny fiangonana miteny malagasy amin ny fotoam-pivavahana, indrindra fa ny eto Madagasikara. Amin izao fanombohan ny taonjato faha-21 izao dia maro ny dikan ...